वामदेव गौतम :एकता भाँड्न खोज्दा मदन भण्डारीले झन्डै पार्टीबाट निकाले | Everest Online News
मे 12, 2018 मे 12, 2018
Reporter: Everest Online News Bam Dev Gautam
काठमाडौँ, बैशख २९ गते।
०३६ साल जेठमा रुपन्देहीमा आयोजित पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मदन भण्डारीलाई मैले पहिलोपटक भेटेको थिएँ । हामीले पुष्पलाल समूहबाट सँगसँगै विद्रोह गरेका थियौँ । विद्रोहमा म रुपन्देहीबाट, उहाँ मोरङबाट नेपाल क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी संगठनको सदस्यका रूपमा एउटा समूहको नेतृत्व गर्दै सामेल हुनुभयो । मदनसँगै बुद्धिजीवी संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष युद्धप्रसाद मिश्र, महासचिव मोदनाथ प्रश्रित र सदस्य जीवराज आश्रितलगायतका साथीहरू पनि विद्रोहमा सामेल हुनुभएको थियो । तर, त्यहीबीचमा म पक्राउ परेकाले मदनसँग भेट हुन पाएन ।
जेलबाट छुटेपछि रुपन्देहीमा आयोजित तत्कालीन मालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मदनसहित सबै केन्द्रीय सदस्य साथीहरूसँग सामूहिक भेट भयो । त्यतिवेला भूमिगत नामबाट
सामान्य परिचयबाहेक उहाँसँग अरू केही कुरा हुन पाएन । बैठक सकिएपछि उहाँ आफ्नो कार्यक्षेत्र फर्किनुभो, म नयाँ जिम्मेवारीका साथ गण्डकी र धौलागिरीमा पार्टी काममा खटिएँ ।
त्यतिवेला दुई विषयमा हामीबीच गम्भीर बहस भयो । एउटा, नेपालको प्रधान अन्तरविरोध र अर्को अब क्रान्तिको कार्यक्रम के हुनुपर्छ ? भन्नेमा । विषयको बहसमा मदन भण्डारीको बौद्धिकता प्रकट भयो । कहिले भारतीय विस्तारवाद, कहिले साम्राज्यवाद त कहिले भारत र साम्राज्यवादसँग संयुक्त अन्तरविरोध छ भन्ने कुरामा रुमल्लिएकै लामो बहसपछि हामी प्रधान अन्तरविरोध सामन्तवादसँग हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ । तर, त्यो बहसमा महासचिव सिपी मैनालीले सही ढंगले पार्टीलाई नेतृत्व गर्न सक्नुभएन । बरु मदन भण्डारी पार्टीभित्र स्विकार्य नेताका रूपमा स्थापित हुँदै जानुभयो । सिपी मैनाली एक्लै एकातिर र बाँकी सबै केन्द्रीय सदस्य अर्कातिरको अवस्था पनि सिर्जना भयो । पहिले सिपीप्रति धेरै सम्मान भए पनि बहसका क्रममा धेरै आलोचना हुँदै गए ।
उहाँ प्राधिकार सम्पन्न नेता हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले बहसका क्रममा आएका आलोचना उहाँले सहन सक्नुभएन । जतिजति आलोचना हुन्छ, त्यति नै मर्यादामा आँच पुगेको उहाँले ठान्न थाल्नुभयो र एक्लो पर्दै जानुभयो । त्यहीवेला महासचिव सिपीले गोप्य तरिकाले पार्टीको प्रतिवेदन जेलभित्र पठाउनुभयो । जेलमा आरके मैनाली, मोदनाथ प्रश्रितलगायतका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो । तर, बाहिरै कुनै कमरेडले पत्र खोल्नुभएछ । ०३९ सालको कात्तिकमा महोत्तरीमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो । पार्टी महासचिवले पार्टीभित्रको गोप्य कुरा सबै खोलेर जेलभित्र पठाउन खोजेको विषयमा छलफल भयो ।
मदनसँगका केही रोचक प्रसंगहरू पनि छन् । उहाँसँग राजनीतिबाहेक खासै व्यक्तिगत सम्बन्ध थिएन । केन्द्रीय कमिटीको बैठक, पार्टी कार्यालय र यदाकदा उहाँकै डेरामा भेटघाट हुन्थ्यो । सम्बन्ध घनिष्ट त थियो, तर व्यक्तिगतभन्दा उहाँसँग बढी राजनीतिक सम्बन्धमै सीमित रह्यो । माले र माक्र्सवादीबीच पार्टी एकता भएपछि एक पटक माक्र्सवादीका साथीहरूले हामीलाई गलत ढंगले ‘डोमिनेट’ गर्न थाल्नुभयो । एकतापछि उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभयो– मालेले यसपटकको निर्वाचनमा कति जित्ने अनुमान गरेको थियो ? हामीले जवाफ दियौँ, ‘४५ सिट अनुमान गरेका छौँ’ । उहाँहरूले चाहिँ ४० सिट जित्ने अनुमान गर्नुभएको रहेछ ।
उहाँहरूले यो कुरा उठाएर निर्वाचनमा माक्र्सवादीका साथीहरूलाई नै बढी टिकट दिनुपर्ने जिकिर गर्न थाल्नुभयो । यस्तो हेप्ने तर्क आउन थालेपछि हामी (माले)का साथीहरू इरिटेड हुँदै गएका थियौँ । दुई/तीन बैठकपछि पाटनमा सिद्धिलाल सिंहको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय परिषद् बैठक बस्यो । तर, त्यो बैठकमा पनि माक्र्सवादीका साथीहरूले त्यही कुरा दोहो-याउनुभयो । पाटननजिकै ग्वार्कोमा केपी ओलीको डेरा थियो । उहाँले म, अमृत बोहोरा र गुरु बराललाई छलफलका लागि डेरामा बोलाउनुभयो । हामीसँग एकता नगरौँ, भाँडौँ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । माक्र्सवादीका साथीको व्यवहारबाट म पनि धेरै रुष्ट भएको थिएँ । मैले पनि सहमति जनाएँ । अमृत बोहोरा यस्तो कुरा सुन्दिनँ भन्दै फर्किनुभयो, गुरु बरालले सुनेजस्तो गरेर बाहिरिनुभयो ।
अन्तिममा हामी दुई (केपी र म) जना मात्र भयौँ । हामीले सबैतिर भड्काउने सल्लाह ग-यौँ । केपीको डेरामा ल्यान्डलाइन टेलिफोन थियो । उहाँले पूर्वतिर, मैले पश्चिमतिर कुरा गर्ने जिम्मा लियौँ । कहिले पार्टी कार्यालयको त कहिले अन्तै गएर दुवै मिलेर पार्टी एकता भड्काउन थाल्यौँ । हामी एमाले विघटन गरेर माले पार्टी नै चलाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थियौँ । हामीले एकता भड्काइरहेको जानकारी पाएपछि महासचिव मदनलाई कसैले रिपोर्ट गरेछ । एकदिन पार्टी कार्यालयमा केपी र म पुगेका थियौँ । मदनले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउनुभयो । ‘ए कमरेडहरू तपाइहरूले पार्टी एकता भाँड्न लाग्नुभएको छ रे । ठाउँठाउँमा फोन गरिराख्नुभएको रहेछ, यस्तो काम बन्द गर्नुस्,’ भन्नुभयो । हामीले कहाँ भाँड्ने ? भन्दै ढाँट्यौँ ।
मदनले मलाई भगवतीबाहलमा डेरामा बोलाउनुभयो । बाहिर छतमा बसेर कुरा ग-यौँ । त्यतिवेला भारत भ्रमणमा गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर फर्किएपछि हामीले सडकमा आन्दोलन चर्काइरहेका थियौँ । सन्धिलाई संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्ने कि, सामान्य जानकारी मात्र दिने भन्ने विषय विवादका रूपमा चर्किरहेको थियो । गणेमान सिंहले सन्धिलाई संसदको दुईतिहाइले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अडान लिइराख्नुभएको थियो । त्यही कुरा मदन भण्डारी र गणेशमान सिंहबीचको आपसी सल्लामै भइरहेको रहेछ । उहाँले मलाई बोलाएर भन्नुभयो– अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र अन्तरविरोध चर्किंदै गएको छ । हामीलाई यस्तो वेला अवसर प्राप्त भयो भने सरकारमा भाग लिनुहुन्छ कि हुन्न ? मैले हुन्छ भनेँ ।
खासमा मदन भण्डारीकै योजनाअनुसार कांग्रेसको एउटा समूह फुट्ने सम्भावना रहेछ । ब्रेक भयो भने कांग्रेसको एउटा समूह र एमाले मिलेर सरकार बनाउने र त्यो सरकारको प्रधानमन्त्री मदन भण्डारी बन्ने रहेछ । ठ्याक्कै मदनले यही त भन्नुभएको थिएन, तर मैले त्यस्तै संकेत पाएको थिएँ । सोधेको थिएँ, त्यो सरकारमा हाम्रोतर्फबाट के गर्ने ? तर, उहाँले मलाई नै सोध्नुभयो, तपाईंको विचारमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? मैले तपाईं जानुपर्छ भन्ने जवाफ फर्काएँ । उहाँले भन्नुभयो– सबै हुन्छ, पश्चिमबाट फर्किएर आएपछि सबै कुरा गरौँला, तर राजनीतिक स्थिति यसरी गइरहेको छ कि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । तर, उहाँ फर्किएर आउनै पाउनुभएन । मसँग कुरा भएकै भोलिपल्ट उहाँ पोखराको कार्यक्रममा जानुभएको थियो । पोखराको कार्यक्रम सकेर फर्किंदै गर्दा उहाँको दासढुंगामा रहस्यमय जिप दुर्घटनामा निधन भयो ।